Tag Archive for "cia" - सत्तारुढ दलभित्र चर्किरहेको ‘महाभारत’
शीर्ष नेताहरू सीआईएको जालमा परिसकेको कार्यकर्ताहरूको आरोप कुसुम विश्वकर्मा / नेपालबहस डेक्स ने.क.पा. का सहअध्यक्ष प्रचण्डलाई अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले फेरि थाङ्नामा सुताइदिए । २९ मंसिरका दिन सार्वजनिक रुपमा प्रचण्डले घोषणा गरेका थिए, “अब केही दिनभित्रैमा हाम्रो पार्टीको पोलिटब्युरो गठन हुने पार्टी सचिवालयमा निर्णय भइसकेको छ ।” गत बिहिबारको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । अमेरिकाको केन्द्रीय गुप्तचर निकाय (सीआईए)ले साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले नै साउदी पत्रकार जमाल खशोग्गीको हत्या गर्न निर्देशन गरेको ठहर गरेको एक जना अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन् । साउदी अरेबियाले भने त्यस्तो दाबीलाई गलत भनेको छ र युवराजलाई उक्त हत्याको योजनाबारे केही थाहा नभएको दोहो¥याउँदै आएको छ । अमेरिकी गुप्तचर निकाय निकट स्रोतहरूका अनुसार घटनाको अनुसन्धानका क्रममा उसले विस्तृत प... थप पढ्नुहोस्